निक्षेप र कर्जा विस्तार दुबैमा एनआईसी एशिया आक्रामक ग्लोबल आइएमई पछ्याउदै, कुन बैंकको कतिले बढ्यो? – Insurance Khabar
निक्षेप र कर्जा विस्तार दुबैमा एनआईसी एशिया आक्रामक ग्लोबल आइएमई पछ्याउदै, कुन बैंकको कतिले बढ्यो?
प्रकाशित मिति : ४ श्रावण २०७८, सोमबार १५:१५
काठमाडौं । निक्षेप संकलन र कर्जा विस्तारमा एनआईसी एशिया थप आक्रामक देखिएको छ । मर्ज भएर ठुला बनिरहेका बैंकहरुलाई पनि उछिन्दै निक्षेप र कर्जा लगानी दुबैमा एनआईसी एशिया पहिलो हुन सफल भएको छ । एनआईसी एशियालाई ग्लोबल आइएमई बैंकले पछ्याइरहेको छ । पछिल्लो समय साविकको अवस्था भन्दा आक्रामक शैलिमा प्रस्तुत भैरहेको नविल बैंकले पनि गत वर्ष राम्रो सुधार गरेको छ ।
एनआईसी एशियाले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ८९ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढाउनुका साथै ९१ अर्बले कर्जा विस्तार गरेको छ । बैंकले तीन खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी दुई खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँले कर्जा विस्तार गरेको छ । त्यस्तै दोस्रो स्थानमा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकले ५६ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढाउदा ४२ अर्बले मात्रै कर्जा विस्तार गर्न सकेको छ । बैंकले दुई खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरि २ खर्ब ४२ अर्ब कर्जा विस्तार गरेको छ ।
त्यस्तै विविल बैंकले यस वर्ष ३४ अर्बले निक्षेप बढाउदा ५२ अर्बले कर्जा विस्तार गर्न सफल भएको छ । यस अवधिमा बैंकले २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरि २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेको छ । कर्जा विस्तारमा सबैभन्दा कमजोर नेपाल एसबिआई बैंक देखिएको छ । एसबिआईले ७ अर्बले मात्रै कर्जा विस्तार गर्न सकेको छ । यस अवधिमा निक्षेप पनि ४ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । एसविआई सँगै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको पनि निक्षेप २ अर्बले घटेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा समग्र बाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप संकलन ७ खर्ब ११ अर्बले बृद्धि हुँदा कर्जा लगानी ८ खर्ब १५ अर्बले बढेको छ । यस अवधिमा बाणिज्य बैंकहरु सँग ४२ खर्ब एक अर्ब निक्षेप रहेको छ भने ३७ अर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ ।